🥇 ▷ Google ayaa baraya sida aad wax uga qaban karto Pixel 4 gacmo la’aan ✅
Google ayaa baraya sida aad wax uga qaban karto Pixel 4 gacmo la’aan
Google Pixel 4, gacmo ma leh!
Iyada oo loo marayo fiidiyow iyo maqaal ku jira bogga rasmiga ah ee Google, shirkadda waxay dooneysay inay adduunka u muujiso sida tikniyoolajiyadda ugu xiisaha badan ee ay u shaqeyso mustaqbalka dambe. Magaca Soli, teknolojiyadda ayaa lagu salayn doonaa qalabka radar nooca dhaqdhaqaaqa ee ogaan kara dhaqdhaqaaqa iyo walxaha ka horreeya aaladda.
Waxaa laga yaabaa inay ku xiiso geliso…
Tani waxay noqon doontaa hore ee Pixel 4: guluus ballaaran si loo qariyo kamaradaha hore iyo… wax kale
Qalabkaan dareemahu wuxuu raaci doonaa dareemayaal kale oo badan oo laga heli doono hore ee aaladda, sida kamaradda hore, dareeraha infakshanka ee furitaanka wajiga, dhawaanta iyo qalabka iftiinka dhalaalaya iyo mashiinka kaalinta. Waa xarig dareemayaal ah oo si aad ah looga xasuusto kuwa iPhone X, in kasta oo ay dhacdo Google, feejignaan ku filan ayaa la siin doonaa isticmaalka tilmaamaha si loogu isticmaalo aaladda iyadoon taaban.
Google wuxuu ka hadlayaa beddelka heesaha, aamusinta wicitaanka ama ku daminta qaylo-dhaan tilmaanta, laakiin waxay hubisaa inay jiri doonaan howlo kale oo badan. Dabcan, wax soo jiidanaya indhahayaga ayaa ah inay caddeeyaan in nidaamka dareemayaasha mooshinka “laga yaabo inaan laga helin dhammaan waddammada Pixel.” Waa xoogaa shaki yar, laakiin wax walba ayaa macno samayn kara haddii tikniyoolajiyadda laga heli karo hal tusaale (Pixel 4 XL, tusaale ahaan) iyo noocaas oo aan gaarin suuqyada oo dhan. Waan arki doonnaa sida ay waxani ku dhamaan doonaan.
Nooc kale oo cusub ayaa noqon doonta nidaamka aqoonsiga wajiga kaas oo furi doona taleefanka kaliya adiga oo eegaya shaashadda. Waa tikniyoolajiyad horey u jirtay oo ku jirtay aalado kale oo badan, in kasta oo ay dhacdo in Pixel 4 ay u dhowaan doonto soo-jeedinta Apple leh iPhone-keeda iyadoo ay ugu wacan tahay jiritaanka mashruuc goob-joog ah iyo nambarka goobta.
Sida iska cad, macluumaadka loo isticmaalay in lagu furo aaladda oo lagu bixiyo lacag-bixintu waa mid xasaasi ah, sidaa darteed soo-saaraha ayaa isticmaali doona galkaaga amniga Titan M si loo kaydiyaa xogta loona ilaaliyo asturnaantaada, si macluumaadka aan loogu keydin daruurta ama meel kale oo aan ahayn taleefankaaga.
Si tartiib tartiib ah Pixel 4 wuxuu bilaabaa inuu shaaciyo kaararkiisa oo dhan, oo la arkay kuwa la arkaa, waxay umuuqataa in yar oo intaas ka badan inay wax ku bari doonaan. Ma u malaynaysaa in Google badbaadin doonto wax kale oo yaab leh oo la yaab leh? Ogaanshaha wax walba waxay bilaabaan inay noqdaan waxoogaa caajis ah.